Dowladda Somaliya ayaa gelinkii dambe ee maanta deeq la gaartay waloow ay la daahady – Damqo
Dowladda Somaliya ayaa gelinkii dambe ee maanta deeq la gaartay waloow ay la daahady
Dowladda Somaliya ayaa gelinkii dambe ee maanta deeq ay ugu tala-gashay shacabka reer Berdaale gaysay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Guddiga Gurmad Qaran oo deeqdaan ka diray Magaalada Muqdisho ayaa diyaarad ku geeyay Magaalada Baydhabo, iyadoona ay ku wareejiyeen Guddiga Gurmadka Fatahaadaha ee Maamulka Koonfur Galbeed.
Deeqdan ayaa isugu jirta teendhooyin, mara kaneeco iyo malmalaato, waxayna bilow u tahay gurmadka ay Dowladda Somaliya ugu tala-gashay in la gaarsiiyo shacabka ku barakacay fatahaadaha ka jira Degmada Berdaale ee Gobolka Baay.
Wasiirka Gargaarka Maaraynta & Musiibooyinka Koonfur Galbeed ahna Gudoomiyaha Guddiga Gurmadka Fatahaadaha Koonfur Galbeed, Cabdinaasir Cabdi Caruusha ayaa sheegay in tani ay tahay mid loogu tala-galay dadka ka barakacay Degmada Beraale.
Wasiirka ayaa tilmaamay in deeqda ay uu daabuli doonaan Degmadaasi Berdaale, si loogu qaybiyo dadka ka barakacay halkaasi oo guryo cooshado u badan ka samaystay duleedyada Berdaale.
Fatahaadaha halakeeyay Degmada Berdaale ayaa waxay ka dhasheen roobab xoogan oo ka da’ay Gobolka Baay.
Previous Gurmad Maanta La Gaarsiinayo B/weyne taasoo micnaheeda yahay in lagagaabiyay gargaarka ay mudnayeen (Dawo)
Next Daacish ayaa waxa ay ku dhawaaqeen hoggaamiyaha cusub Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qurayshi. Kadib markii la dilay hoggaamiyihii Kooxdaasi Abuubakar Al Baqdaadi.
*Madaxweyne Farmaajo iyo Maalinta Oktoobar* oo ka fashilantay asagoo rabay in oo xusso Ogtobar
Siidoow waa aaminay Xaliimadiisii, Sawirkii ayuuna Hooyadii u soo diray. Hooyadii ayaa ku tiri: walac aaaaa, kanu fir iyo Farac Reer Siidoow male, ee Faragalin shisheeye ayaa jirto.
Agaasimaha ku xigeenkii hey’adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya laanteeda Puntland ayaa goor dhaw ku geeriyooday dhaawac ka soo gaaray dagaal magaalada Garowe ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan Puntland.
Senator Muuse Suudi oo degaan doorashadiisa tahay Hirshabelle ayaa xusay in aysan jirin wax gurmad ah oo u socdo Baladweyne.
(Dawo vidiyaha si wax badan u ogaato) Dawo